Maka iyo Madiina oo Salaada Jameecada laga mamnuucay. | Banaadir Times
HomeUncategorisedMaka iyo Madiina oo Salaada Jameecada laga mamnuucay.
Maka iyo Madiina oo Salaada Jameecada laga mamnuucay.
Sacuudi Carabiya ayaa joojisay in gebi ahaanba salaaddaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo bannaanka labada masjid ee barakaysan ee ku kala yaalla Maka iyo Madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus.
Masjid al-Nabawi oo ku yaalla madina aya aka mid ah masaajidda la xiray.
Previous articleMadaxweynaha puntland matagi doonaa Muqdisho?
Next articleMaxaabiis ugeeriyootay cabsi laga qabo Caabuga Corono-virus